UFC Fighter Night May 8 – Atụmatụ na amụma – Stake blog
Dateline Vegas, anyị laghachi azụ na UFC apex maka ọgụ ọgụ na-atọ ụtọ abalị tupu anyị aga Houston maka UFC 262 izu na-abịa. A na-eleghara kaadị a anya n’ihi ịnwe isiokwu mbubreyo na-egbu oge, mana ọgụ ndị a na-agbawa n’agbanyeghị. Ka anyị banye n’ime! Uche Ogbuagu Vs Alex Morono Na ngalaba-isi ihe omume nke
Emepụtara Texas Hold’em, nke bụ poker, na mmalite nke narị afọ 20 na Robstown, Texas. Blondie Forbes, onye bụ onye na-agba chaa chaan’okporo ụzọ si Texas, mepụtara egwuregwu ahụ miniature nwee echiche dị ukwuu na e webatara ya na Poker Hall of Fame na 1980! Mana Texas Hold’em agaraghị eche echiche ma ọ bụrụ